UGlafira Tarkhanov: i-biography, ubomi bomntu kunye nabantwana, indoda uAlexey Fadeev, isithombe kwi-Instagram Tarkhanovoy
UGlafira Tarkhanov: umdlali othandekayo nomama wabantwana abane
U-Glafira Tarkhanov ungumdlali onetalente owanikela ababukeli nomphefumlo wakhe othobekileyo, obuhle kunye nonobuncwane obubonakalayo, imisebenzi ebonakalayo. Wayekhumbula ezininzi ifilimu ethi "Gromovs", inqwaba yeentsimi ezamnqobayo esebenza kumabhayisikobho "IIvini ezimbini." Kwimifanekiso yakhe yefilimu, uluhlu olupheleleyo lweendima ezahlukileyo. Ngaphantsi kwempumelelo uhlangabezana nomsebenzi we-actor kwi-theater "Satyricon". Kodwa ngokugqwesileyo kubo bonke, wayenomsebenzi obunzima, kodwa obalulekile kwaye oqaqambileyo womama nomfazi.
I-Biography uGlafira Tarkhanovoy - ubuntwaneni kunye nentsha
UGlafira Tarkhanov ngumthonyama wesithili saseMoscow. Wazalelwa kwisixeko sase-Elektrostal ngowe-1983. Ngokuqinisekileyo kunokuthiwa ngumdlali welifa, kuba abazali bakhe bangabalingisi be-puppet theater. UBawo akazange akhulise intombi yakhe. Washiya intsapho emva kwexesha lokuzalwa kwentombazana. Utata oyinyumba wayemnyamekela. Ekunye nomama kaGlaphira, wachitha ixesha elide ekuphuhliseni ngokupheleleyo umntwana.
Intombazana yayijongene neentlobo ezahlukeneyo zezemidlalo, ezazisoloko zibhekwa njengeyona nto enhle kunye nesetyhini: ukukhwabanisa imifanekiso, ukubhukuda okuhambelanayo-ezi zifundo zenze i-plasticity yomdlali we-actress, yomeleza umzimba kunye nokuthanda kwayo. Iiklasi ekudansa ibhola, izifundo kwizifundo zomculo zaseRashiya, iikhosi kwizakhono zentlalo ziye zenza uthando lobugcisa nobugcisa. Ukongezelela, uGlafira waphumelela kwisikolo esiphakamileyo semfundo kunye nesibalo semvelo nesemathematika.
Namhlanje, umdlali wothando uyabulela abazali bakhe ukuba bamnika imfundo enhle kwaye bavelisa ubuntu obunelisekile. Ulwazi olufunyenweyo luza kumnceda ukuba akwazi ukujamelana nemisebenzi enzima kunzima kwi-set. Nangona unina okanye umnina-ntombi wayengafuni ukuba intombi yabo idlulise ubomi bayo ukwenza. Baphupha ngekamva leyeza likaGlaphira.
Intombazana yayingafuni ukunyamezela esi sigqibo sabazali bayo. Emva kokugqiba ibanga lesithoba, intombazana encinane kakhulu ithatha inxaxheba kwintlonelo yesikolo somculo we-opera weGalina Vishnevskaya. Kulapho ufunda ingoma yokufunda, kunye nokudlala ipiyano kunye ne-violin. Kwaye, nangona amazwi akhe awazange afaneleke ngokucula, wayezikhandla kwaye wafumana amabanga amahle. U-Glafira waziswa kwimoya yakhe yeso sikhundla nguyise. Ngaphandle kokufuna ukwenza oku, wancedisa ukucacisa intombazana kunye nokusebenza kwangomso. Wayefuna nje ukumkhupha ekubeni ngumculi we-opera aze amlethe kwiimviwo zokungena kwiSchool School Theater. Ngokutsho kwengcamango yakhe, umntwana oza kuzalwa kufuneka aqonde ukuba kunzima kangakanani nangokwemvakalelo umsebenzi womdlali. Kodwa impembelelo yavela ukuba yinto echasene nayo - wagqiba ekubeni azinikezele ubomi bakhe kwizinto zobugcisa ngonaphakade. I-Melpomene yakhanga uGlafira ngakumbi kwaye ngo-2001 wangenisa amaxwebhu kuwo onke amanyunivesithi aseMoscow.
Yaye imizamo yaloo nto yayingenayo ingenayo engenaziwayo yayithweswa yimpumelelo - yangena kwi-Moscow Art Theater School. Wafunda khona iminyaka engama-4, inkokeli yeqela yayiyinkohlakalo uKonstantin Raikin.
Njengomfundi uGlafira wathola indima emininzi kwinqanaba elidumileyo elithi "Satyricon". Imisebenzi yokuqala ye-actress yokuqala yayiyi "Chauntecleer" kunye "Indawo enenzuzo". Emva kokugqiba esikolweni-studio kunye nokufumana idiploma, wajoyina inkundla yesaterater "Satyricon".
Kodwa umkhwa wophuhliso oluninzi kunye nomnqweno wokuba ubuntu bendawo yonke kubangele ukuba umdlali we-actress akazange ayeke kwimfundo ephakamileyo. Wagqiba ekubeni ancedise idiploma yakhe yomdlali kunye neminye imfundo. Nangona ngelo xesha wayengenakukwazi ukugqiba ukuba yiyiphi iprofesenti yokuqonda. Ingcamango yaphakanyiswa ngumama, osandul Amabali akhe malunga neentetho ezithakazelisayo kunye nokuzivocavoca okusebenzayo kuye kwathandeka kakhulu uGlafira ukuba naye, wanquma ukungena eMoscow Psychological Faculty kwaye waphumelela ngo-2008.
Ukuqhuba umsebenzi uGlafira Tarhanova
Ngesihlandlo sokuqala umbukeli wabona umdlali omncinci uGlafir Tarkhanov ngo-2003 kwifilimu ethi "uMbonisi wezithuthi". Ingqungquthela yeengqungquthela "Ukuwa kweBukhosi" akukwenzanga nje ukuba umdlali weqhawe, kodwa naye wazisa abaninzi abadlali abadumile, njengoNikola Baluyev noNina Usatova.
Kulo mfanekiso - indima kaTanya Zaitseva kwifilimu ethi "Ukuwa kweBukhosi"
Umdlali wodumo ovusiweyo emva kokukhululwa kwechungechunge elithi "Gromov" ngo-2006. Kule filimu, wayedlala intombazana enamandla, enobubele kunye nehloniphekileyo ekhuthazela ngokwaneleyo zonke iingxaki zexesha elizeleyo kwaye ihlala yindoda kwimeko enzima kakhulu.
Emva kolu msebenzi wefilimu, umdlali we-actress ngokukhawuleza wanciphisa izikhundla kwiindidi ezahlukahlukeneyo. Namhlanje, kwi-akhawunti yomdlali owaziwayo malunga neendima eziphambili kunye nezesekondari kwi-cinema. Kananjalo unayo irekhodi yeendima ezisebenzayo zikaGlafira Tarkhanova kunye nesigaba - uthatha inxaxheba kwimveliso engama-13.
Ifilimu "Omnye umhlobo omhle wentsapho" ngokuthatha inxaxheba kaGlafira Tarhanova
Ifilimu "ekusithekeni kwihlabathi lonke." Inendima kaNyuta Lyubimova - iGlafira Tarkhanov.
Kungekudala, wazizama njengenkqubo ehamba phambili yeTV "Londoloza Umntwana wam". Injongo yale projekthi kukunceda abantwana abanezifo ezinzima.
Ubomi bomntu bomdlali: uGlafira Tarkhanov kunye nomyeni wakhe uAlexey Faddeev
Ifilimu "I-Caliber Main" yaba yinto ebalulekileyo ebomini bukaGlafira. Ngo-2005, kwisethi, umdlali we-actress wadibana nomyeni wakhe wesikhathi esizayo. U-Alexey Faddeev ungumdlali odlala indima yomqhubi weYuzhin kwifilimu.
Ngokutsho kwebini, incwadana yenkonzo kwi-set of series yabekwa ngaphandle, kuba uGlafira uyintombazana enzulu. Kodwa, nangona kunjalo, emva kweenyanga ezintandathu abadlali benza iintsapho. Kwinkalo yabaninzi babonakala ngathi ulwalamano lwabo luchule ngokukhawuleza - badibana nentwasahlobo, kwaye ekwindla batshata. Umdlali we-actress ngokwakhe uthi le yinto yokunyaniseka. Intsilelo yomsindo ngokuthe ngcembe ibe yintando kunye nomtshato onamandla, othembekileyo.
Abantwana bakaGlafira Tarhanova
Emtshatweni noAlexei Faddeev, uGlafira waba ngumama wabantwana abane. Umdlali we-actress ukhethe amagama akhe. Ukholelwa ukuba igama lomntwana kufuneka libe neleta "P" - linika amandla umntu ngomlingiswa. Ngokubhekiselele kubangaphi abantwana abasayi kubonakala kwiintsapho ezidumileyo, umdlali weqhawe uhleka - uthi yena nomyeni wakhe baxoxa ngale ngxaki, kodwa abazange bafike kwisigqibo sekhonkrithi. Namhlanje uGlafira Tarkhanov unina wabantwana abane.
Kuyathakazelisa ukuba unyana wokuqala wazalwa esibhedlele. Amanye a makhwenkwe amanye abeletha umdlali weqhawe ekhaya. UGlafira unoluvo lokuba abantwana kufuneka bazalwe kwindawo ekhululekile kunye noxolo, engenakwenzeka kwizibhedlele eziqhelekileyo zokubeletha. Kodwa akabizi ukuba wonke umntu enze okufanayo. Umdlali okholelwa ukuba umfazi ngamnye kufuneka azikhethele yena ngokwakhe kwaye alungiselele ukuzalwa nawo wonke uxanduva.
Kungekudala, kwi-intanethi, abalandeli banemibuzo eninzi malunga nokuba baninzi abantwana abakwaGlafira Tarkhanovoy. Abantu abaninzi bacinga ukuba umdlali wakho ozithandayo unabantwana abathathu, kanti abanye bathi kukho ezine. Inyaniso kukuba abantu abaninzi abanalo malunga nokuzaliswa kwabalingisi kwintsapho-ngoSeptemba 19, 2017 babenendodana yesine. Abalingisi bakhetha ukuba bangabhengezeli ngoku. Enye ingxaki enganiki ukuphumla yimizuzu emininzi abantwana bakaGlafira Tarhanova. Kodwa oku akusiyo mfihlelo, umdlali we-actress unabantwana abane abanomncinane weminyaka yobudala:
ImiGaqo - iminyaka eyi-9.
Ermolai - iminyaka engama-6.
UGordei - iminyaka emine.
UNicphophos wazalelwa ngoSeptemba 2017.
Iindaba zakutsha ezivela kubomi bomntu womdlali we-actress - uGlafira Tarhanova wazala umntwana wesine. Isiganeko esivuyisayo kunye nesiganeko ebomini somdlali wexesha elizayo-ukuzalwa kwonyana wesine waseNicphorus. U-Glafira uzame ukukhawulela ingqalelo ekhethekileyo kuluntu kumcimbi. Kwisithombeni sakhe nge-Instagram kwakungabonakali ukuba umdlali weqhawe kulindeleke ukuba azalise kwintsapho. Ngoko ke, kubalandeli abaninzi, i-poster yomdlali wezonxibelelwano zentlalo yayimangaliswe ngokupheleleyo, apho wayenolwazi naye ngokuzalwa komnye umntwana.
Umama omncinci onabantwana abaninzi ugcwele amandla kwaye akayi kuhlala ekhaya ngelikhefu lokubeleka. Ngaphantsi kweenyanga emva kokuba usapho luzaliswe, kunye noGlafira Tarkhanov sele sele behamba ngotyelelo lwezobugcisa. Abanye abalandeli abazange bamkele le ntsikelelo yomsebenzi baze bagxeke umdlali we-actress ngokushiya ikhaya lomntwana. Kodwa kamva kwavela ukuba akukho mntu washiya mntu. Umdlali we-actress wathatha u-Nikifor omncinci naye ekutyeleleni.
Ukuxhasa amagama akhe, umama omncinane wabelana ngevidiyo kunye neefoto kwi-instagram. Kuye waqala ukumbonisa umntwana, owathi, nangona ubudala bakhe, ubonisa isibindi esinyanisekileyo kwaye ukhuthazela ngokukhawuleza ishedyuli esomeleleyo kanina. Mhlawumbi oku kungumlingo wencwadi "R" egameni?
UGlafira Tarkhanov kunye nomyeni wakhe nabantwana - isithombe seentsapho ezonwabileyo kwi-Instagram
U-Alex noGlafira bathanda ukutyhila ubomi babo bobuqu. Akunakufaneka ukukholisa abalandeli babo ngeefoto kwiintanethi zentlalo, apho intsapho iboniswa ngokupheleleyo. Iifoto ezitsha ze-actress:
NgoNovemba ka-2017, umdlali we-actress uthathe inxaxheba ekufotheni kwesithombe, apho wavela khona phambi kwamafomu ngendlela enhle. Abaxhasi bakhe babonwabile ngomfanekiso omtsha wabo ozithandayo. Bakuvuyela ukuba, nangona bazalwa ngokutsha kunye nomsebenzi oqhubekayo, kwindlela emangalisayo, ibonakala ibhinqa kwaye ikhangeleka.
Sinikela isithunzi somdlali we-Instagram kunye nemithombo ethile, abonwabileyo nabalandeli babo abanomdlali onetalente, umama onakekelayo kunye nomfazi omhle.
Imenyu yomntwana ukususela kumnyaka omnye ukuya kubini
Imaski yeenwele ezilahlekelwa yintlungu
UXenia Borodina waqala ukuxelela ukuba kutheni uMikhail Terekhin
Inyama kwimikhono kwi-microwave
Iindlela zokubonelela ngendawo yokuhlala yakho
Iimvumba kwiminwe yaseSvetlana Bondarchuk yabangela ukugxekwa, ifoto
Imithetho yokusikwa kwe-massage
Ukulungiselela ukuHlola koManyano eManyeneyo kwiZifundo zeNtlalo
Amabele amabini, amaqhinga amabele
Yiyiphi imbala enweleke kakhulu kunene?